बढ्न थाल्यो सुनको मुल्य, आजको भाउ कति ? – ताजा समाचार
बढ्न थाल्यो सुनको मुल्य, आजको भाउ कति ?
काठमाडौं । बिहीबार प्रतितोला ९ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेको छ ।
बुधबार प्रतितोला ६९ हजार ८ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको सुन बिहीबार ७० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
त्यस्तै तेजावी बुधबारको तुलनामा प्रतितोला ९ सय रुपैयाँ बढेर ७० हजार ६ सय रुपैयाँमा बिक्री भईरहेको छ ।
चाँदी प्रतितोला ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ भने बुधबार प्रतितोला ८ सय ३५ रुपैयाँमा बिक्री भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायीले जानकारी दिएको छ ।